ဘုရင်အလောင်းမင်းတရားမှ ဘုရင်ဂျော့-၂ ထံပေးပို့သော ရာဇသံရွှေပေ အပိုင်း(၅) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » ဘုရင်အလောင်းမင်းတရားမှ ဘုရင်ဂျော့-၂ ထံပေးပို့သော ရာဇသံရွှေပေ အပိုင်း(၅)
ဘုရင်အလောင်းမင်းတရားမှ ဘုရင်ဂျော့-၂ ထံပေးပို့သော ရာဇသံရွှေပေ အပိုင်း(၅)
Posted by ၀င့်ပြုံးမြင့် on Oct 5, 2012 in History | 16 comments
၁၇၅၆ ခု၊စက်တင်ဘာတွင် ကပ္ပတိန်ဟိုး ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး ‘ဟိုး’၏နေရာကို ဒုတာဝန်ခံ သောမတ်စ်နျူတန် ဆက်ခံခဲ့သည်။ မကြာမတင် မှာပင် ပဲခူးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုရန် ကိစ္စများရှိကြောင်း နျူတန့်ထံ အလောင်းမင်းတရားကြီး သတင်းပါးခဲ့သည်။ အမှန်မှာ အလောင်းမင်းတရားသည် ကုမ္ပဏီနှင့် အလုပ်ကိစ္စများ ပြီးစီးအောင်လုပ်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ ဤသို့ဖြင့် နျူတန်သည် ဒုဗိုလ်ကလေး ရောဘတ်လက်စတာအား ရန်ကုန်မှ ရွှေဘို ရှင်ဘုရင်အပြန်ခရီးတွင် ရှေ့တော်မှောက်ဝင်ရောက်ခစားရန် စေလိုက်၏။
လက်စတာသည် မဟာမိတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် နောက်တစ်ကြိမ်လျှောက်ထားပြန်သည်။ အလောင်းမင်းတရားသည် ရင်းဖျား ပတ္တမြားနှစ်ရစ်စီသော ရွှေပေစာသဝဏ်လွှာပေါ်တွင် ရှင်ဘုရင့်တံဆိပ်တော်ကို ခတ်နှိပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ချက်ချင်းမိန့်ကြားတော်မူသည်။ ဂျော့ဘုရင်-၂ နှင့်ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာများထံ ပို့ခဲ့သောစာများကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်၏။ ရှင်ဘုရင်သည် အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ တောင်းဆိုသောအရာများကို ပေးသနားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း အလေးပေး ဖော်ပြလိုခဲ့သည်မှာ ရှင်းလင်းပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာဘုရင်သည် ရာဇသံစာများပေးပို့ခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ် ကျော်ပြီဖြစ်သည့်တိုင် အကြောင်းပြန်စာကို စောင့်စားနေဆဲဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။
လက်စတာနှင့်ဆက်လက်ဆွေးနွေးရာတွင် အလောင်းမင်းတရားသည် ”မဟာမိတ်စာချုပ်ကို တံဆိပ်တော် ခတ်နှိပ်ပေးမည်၊ ရှင်ဘုရင်ပိုင်နက်နယ်မြေအတွင်း မည်သည့်နေရာ၌မဆို ကုန်သွယ်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးမည်” ဟူသော စကားဖြင့် နိဂုံးချုပ်ခဲ့၏။ လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်က ပြောဆိုဆွေးနွေးရန် ဝန်လေးခဲ့သော ဟိုင်းကြီးကျွန်းအခြေချနေထိုင်ခွင့်ကို ပေးသနားခဲ့သည်။
နျူတန်ကို မင်းတရားဆင့်ခေါ်လိုက်ခြင်းမှာ မင်းတရားသည် လက်နက်ဝယ်ယူရန် အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီကို ယခုရော ယခင်ကပါ မျက်နှာချိုသွေးသောအမှုကို မပြုခဲ့ဟု ပြဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ လက်နက်နှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက် ပံ့ပိုးမှုသည် စိတ်ချအားကိုး၍မရသလို လက်ငင်းငွေချေပေးသည့်တိုင် မင်းတရားမျှော်လင့်ထားသလောက်လည်း ဖြစ်မလာ။ ထိုအခါ လက်နက်ပံ့ပိုးခြင်းဟူသည် အရေးပါသည့်အနေအထားတွင် မရှိတော့။ မှတ်သားရန်မှာ မင်းတရားသည် လက်စတာ့အား ‘ပဲခူးတွင်မြောက်မြားစွာသော သေနတ်၊ဗုံး စသည့်စစ်သုံးပစ္စည်းများကို သိမ်းယူ ရရှိခဲ့ကြောင်း’ မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ အလောင်းမင်းတရားသည် အိန္ဒိယမင်းသားများနှင့် ကွာခြားစွာ စစ်ပွဲတစ်ပွဲ အနိုင်ရဖို့အတွက် အင်္ဂလိပ်တို့ထံမှ စစ်ကူမလိုကြောင်းပြသခဲ့သူဖြစ်၏။
လက်စတာသည် လွန်ဆေးမှမပြန်ခင် ပုသိမ်မြို့ဝန် အန်တိုနီယိုနှင့် မျက်နှာစုံညီထိုင်ပြီး စာချုပ်၏ အသေးစိတ်များကို ပြီးပြတ်အောင်လုပ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် ပုသိမ်မှ မြေနေရာအတိုင်းအတာဖြစ်၏။ အပြန်တွင် ပုသိမ်သို့ဝင်ပြီး ယင်းမြေနေရာကို ”အလောင်းဘုရား၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ရယူသော ဂုဏ်သရေရှိ အရှေ့အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီပေါင်းစုပိုင် မြေကွက်” ဟူ၍ လက်ဝယ်ရယူသည်။ အလံလွှင့်တင်ပြီးသောအခါ ဟိုင်းကြီးကျွန်းသို့ပျော်ရွှင်စွာ ပြန်လာခဲ့၏။
ရှေ့တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီသည် အချိန်တန်လျှင် ပုသိမ်သို့ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ရွှေ့ယူလာလိမ့်မည်ဟု အလောင်းမင်းတရားက ယုံကြည်နေသည်။ ဟိုင်းကြီးကျွန်းကဲ့သို့သော၊ ပထဝီသဘောအရ အားနည်းလွန်းသောနေရာဒေသတွင် အခြေစိုက်လိုသည့် ကုမ္ပဏီ၏ရှုမြင်တွေးခေါ်ပုံကို မွန်နှင့် မြန်မာဘုရင်များ ရှေးမဆွကတည်းက မေးမြန်းတော်မူခဲ့သည်။ ပုသိမ်တွင် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများ တိုးတက်ခြင်းရှိမလာဘဲ အခြေခံအားဖြင့် ဟိုင်းကြီးကျွန်းကိုသာ ဖက်တွယ်ထားသော ကုမ္ပဏီအား ရွှေဘိုမှရှင်ဘုရင်သည် တိုး၍သာ သင်္ကာမကင်းဖြစ်လာတော့၏။
ကုမ္ပဏီသည် အနည်းဆုံးစရိတ်စကဖြင့် ဟိုင်းကြီးကျွန်းကိုလက်မလွှတ်ဘဲထားရဖို့ ဖြစ်နေချိန်တွင် ၁၇၅၈ ခု၊ ဇူလိုင်လ၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က ပီးဂေါ့ထံစာရေးသောအခါ ပုသိမ်၌ရှေ့ဆက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးသည် စာရင်းထဲမှ ပျက်သွားတော့၏။
”… ထိုဒေသတွင် အခြေစိုက်ခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမားခဲ့ပြီးပြီ။ ပဲခူးတွင်လည်း အခြေအနေမငြိမ် သက်သောကြောင့် အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းဖို့ရာ အလားအလာနည်းလှသည်။ အထူးသဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏လက်ရှိအ ခြေအနေကြောင့် ပုသိမ်ဖြစ်စေ၊ သံလျင်ဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သည့်နေရာ၌ဖြစ်စေ၊ အခြေချမှုအသစ်များလုပ်ရန် မစဉ်းစားနိုင်သေး။ ဤသို့သောစီမံချက်ကို တိုင်းပြည်ငြိမ်သက်လာချိန်ထိ ဆိုင်းထားရမည်။”
၁၇၅၉ ခု၊စက်တင်ဘာ ၁ရက်တွင် ကပ္ပတိန်ဝီလျံဆောက်သ်ဘီသည် ဒုဗိုလ်ကလေးဟုပ်ကို ဟိုင်းကြီးကျွန်း တွင် တာဝန်လဲပေးရန်နှင့် ကျန်ရှိနေသေးသော သစ်လုံးများကောက်ရန် ကာလကတ္တားမှထွက်ခွာလာသည်။ ကျွန်းပေါ်ရောက်ပြီး နှစ်ရက်အကြာ၊ ၁၇၅၉ ခု၊အောက်တိုဘာလ ၄ရက်တွင် ဆောက်သ်ဘီနှင့် အမှုထမ်းများထံ ပုသိမ်မြို့ဝန် အန်တိုနီယို ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာများရောက်လာကြသည်။ ရုတ်ချည်းဆိုသလို ခံတပ်တစ်ခုလုံးကို မြန်မာရဲမက်တော်များစီးနင်းလိုက်ကြကာ ခံတပ်ကိုစီးမိပြီးသည်နှင့် မြန်မာရဲမက်တော်များသည် ကုမ္ပဏီသင်္ဘောများကို မီးရှို့သည်။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများစွာ အသတ်ခံရသည်။ အချို့မှာ ဖမ်းဆီးခံရသည်။
ထိုကဲ့သို့သော တိုက်ခိုက်မှုမျိုးသည် ရှင်ဘုရင်ကိုယ်တိုင်၏ တိကျပြတ်သားသော အမိန့်မပါလျှင် စဉ်းစားဝံ့စရာမရှိချေ။
အလောင်းမင်းတရားကြီး မဏိပူရမှ စစ်တိုက်ပြီးပြန်အလာ မြောက်ပိုင်း၌ရှိနေစဉ် ၁၇၅၉ ခု၊နှစ်လယ်တွင် မွန်တို့သည် နောက်တစ်ကြိမ်ပုန်ကန်ကြောင်း အမှတ်ရပေမည်။ မြန်မာမြို့စောင့်တပ်က ပုန်ကန်မှုကို နှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့သည်။ မွန်တို့ကို ကူညီပံ့ပိုးမှုကြောင့် အလောင်းမင်းတရားသည် ရဲမက်များလွှတ်၍ အင်္ဂလိပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများ၊ လက်နက်နှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်များကို သိမ်းယူစေခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အလောင်းမင်းတရားအား ဂရက်ဂေါ်ရီက အိန္ဒိယပြည်တွင် အင်္ဂလိပ်တို့ နယ်မြေချဲ့ထွင်ခဲ့ပုံနှင့် မြန်မာပြည်အပေါ်လည်း တူညီသောစီမံကိန်းရှိကြောင်း အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းမမြင်အောင်လျှောက်တင်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတွင် ဓားစားခံအဖြစ် အဖမ်းဆီးခံရသည့် ကပ္ပတိန်များထဲမှတစ်ဦးဖြစ်သော ဂျိမ်းစ်ရောဘတ်စန် ၏စာကိုလေ့လာကြရမည်။ ၁၇၅၉ ခု၊နိုဝင်ဘာလကုန်၌ မဒရတ်စ်သို့ ပို့ပေးခဲ့သောစာဖြစ်၏။ သူ့အား အလောင်း မင်းတရားထံ ခေါ်ငင်သွားကြသောအခါ ရှင်ဘုရင်သည် အင်္ဂလိပ်တို့က သူ့အပေါ်ပြုမူဆက်ဆံပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီး ခါးသီးစွာညည်းပြခဲ့ကြောင်းကို
”ရှင်ဘုရင် ကျွန်ုပ်အားမိန့်ကြားခဲ့သည်မှာ ရှင်ဘုရင်သည် အင်္ဂလန်မှဘုရင်ထံ ရာဇသံတစ်စောင်ရေးသား ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း၊ ရွှေအစစ်ပေပေါ်တွင် တံဆိပ်တော်နှင့် လိပ်စာကို တန်ဖိုးအနဂ္ဃထိုက်တန်သော ကျောက်မျက်ရ တနာများဖြင့်စီခြယ်ထားကြောင်း၊ ရာဇသံစာများပေးပို့ခဲ့သည်မှာ သုံးနှစ်ကြာပြီဖြစ်သည့်တိုင် ယနေ့ထိအကြောင်း ပြန်စာ မရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ရှင်ဘုရင်သည် သူနှင့်သူ့လူများကို အင်္ဂလိပ်တို့နှင့်ကုမ္ပဏီက အရူးလုပ်ခဲ့ခြင်း ဆိုသည်မှလွဲ၍ အခြားအဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူစရာ မရှိတော့ကြောင်းမိန့်ကြားခဲ့သည်။”
ဤကိစ္စသည် ဟိုင်းကြီးကျွန်းသုတ်သင်ပွဲအတွက် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမဟုတ်ခဲ့။ သို့သော်ငြား ရှင်ဘုရင်သည် ဤမျှစိတ်ရှည်ရှည်စောင့်ဆိုင်းကာ အင်္ဂလိပ်တို့အပေါ် စေတနာပြသခဲ့ပြီးကာမှ ခါးသီးခဲ့ရသောအဖြစ်ကို ဖော်ပြခဲ့ သည်။ ကြာမြင့်စွာဖြစ်တည်ခဲ့သော စိတ်ပျက်ရခြင်းများ ခါးသီးစရာအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပုံ၊ နောက်ဆုံး၌ ဂရက် ဂေါ်ရီ၏ မကောင်းသောစကားကြောင့် မီးလောင်ရာလေပင့်သကဲ့သို့ ဒေါသအမျက်ထွက်ခဲ့ရပုံကို တွေးကြည့်ဖို့ မခက်ခဲလှပေ။ အလောင်းမင်းတရား၏ ချစ်ကြည်ရေးပဏာမခြေလှမ်းသည် အကြောင်းပြန်စာမရရုံတင်မက အသိအမှတ်ပြုဖော်လေးပင် မရခဲ့သဖြင့် ဤအတွက် မင်းတရားအရှက်ရခဲ့သည်။ မင်းတရား အမျက်ထွက်ရသော အကြောင်းရင်းခံများစွာထဲမှ ဤအချက်သည် သေချာသောအချက်တစ်ခုဖြစ်၏။
ရွှေပေလွှာပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့စာသားပါ။ လက်ဝဲနော်ရထာ စီကုံးပါတယ်။
”ဘုန်းတော်အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူလှသော သုနာပရန္တတိုင်း၊ တမ္ဗဒီပတိုင်း၊ ကမ္ဘောဇတိုင်းစသော တိုင်း ကြီးအပေါင်းတို့၌၊ မြန်မာပြည်၊ ရှမ်းပြည်၊ ယွန်းပြည်၊ ကသည်းပြည်၊ (ဟံသာဝတီ)ပြည်၊ ရာဇဌာနီပြည်ကြီးထီး ဆောင်းမင်းအပေါင်းတို့ကို အစိုးရတော်မူသော ပတ္တမြား၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေး၊ သံ၊ ပယင်း ရတနာတွင်းများသခင် ဆင်ဖြူ၊ ဆင်နီ၊ ဆင်ကျား၊ အရိန္ဒမာစကြာရွှေလှံရ အာဒိစ္စဝံသနေမင်း၏ အဆက်အနွယ်၊ အဆောင်ဆောင် သော ရွှေနန်းရွှေပြဿဒ်သခင်ဖြစ်တော်မူသော ရတနာပူရ အင်းဝပြည်ကြီးနှင့်တကွ အယုဇ္ဈပူရမည်သော ရတနာ သိင်္ဃ ကုန်းဘောင်ရွှေပြည်ကြီးကို၊ အစိုးရတော်မူသော အလောင်းမင်းတရားကြီးဘုရား၊ ချစ်ကြည်စွာကြားရောက် အပ်သော ဇိနပ္ပတ္တံ၊ ဘင်္ဂလား၊ ဝှက်သဒေဝီ၊ ဒေဝီကတ် စသောမြို့အပေါင်းတို့သည်၊ လပြည့်ဝန်းကို နက္ခတ် တာရာအပေါင်းခြံရံသကဲ့သို့ ခြံရံလျက် အင်္ဂလိပ်မြို့မကို အစိုးရသော အကြည်တော် အင်္ဂလိပ်မြို့မဘုရင်- ဘေး လောင်းတော် ဘိုးလောင်းတော်တို့လက်ထက်၊ မြန်မာမင်း အင်္ဂလိပ်မင်း အဆက်ဆက် ဖောက်ကားရောင်းဝယ် ရောက်ပေါက်ကြ၍ အလိုရှိသမျှကို ဆောင်ယူရသည်။ ကိန်းခန်းအလျောက် (ဟံသာဝတီ)တို့ နှောင့်ယှက်ရာတွင် တလတ်တလျား မရောက်မပေါက် ရှိကြ၍ တောင့်တ၍နေသည်နှင့် အကြည်တော် နိုင်ငံတော်စွန်း မော်တင် ဟိုင်းကြီးသို့ အကြည်တော် အင်္ဂလိပ်မြို့မဘုရင်က မည်စလီပရုပ်တို့ကိုစေ၍ ရောက်ပေါက်လာရာတွင်မှ မေးမြန်း ကြားသိရလျှင် အတိုင်းထက်အလွန် မင်းဧကရာဇ်တို့ဝယ် မြို့၏အင်္ဂါခုနစ်ပါးတွင် သခါဟူသော ပြည်ထောင်ချင်း အင်္ဂါတစ်ပါးသည် ဖြစ်ခဲသောအရာကို တွေ့ရပေတော့မည်။ ဝမ်းမြောက်တော်မူသည်။ အကြည်တော် အင်္ဂလိပ် မြို့မဘုရင်က စေသူ မည်စလီပရုပ်တို့က ပုသိမ်မြို့တွင် တိုက်ကြသင်္ဘောသွင်းထားရန် နေရာနေရပ်လိုပါသည် ရှိခိုးသံတော်ဦးတင်သောကြောင့် အကြည်တော် အင်္ဂလိပ်မြို့မဘုရင်ကစေ၍ လျှောက်ရသည်ဖြစ်သည်။ အရှည်ချစ် ကြည်ရမည်ကိုထောက်၍ ကြိုက်ရာနေထိုင်စေ။ ပုသိမ်မြို့တွင် တိုင်းတာမှတ်သား၍ ပုသိမ်မြို့ဝန်တို့က ချပေးစေ သည်။ အကြည်တော်အင်္ဂလိပ်မြို့မဘုရင် အမှူးအမတ် ပုသိမ်မြို့ဝန်တို့ မျက်နှာစုံညီ တံဆိပ်စာချွန်တော် ပေးအပ် တော်မူသည်။ ပြည်ထောင်ချင်း မင်းတို့ဝယ် မြတ်သောအဆွေခင်ပွန်းကောင်းတို့ကို မှီကြရသည်ဖြစ်မှ အလိုရှိရာ နှစ်ဦးသားပြည့်စုံကြမည် ဖြစ်သည်။ သားတော်အစဉ်၊ မြေးတော်အဆက်၊ မြစ်တော်အညွန့်၊ အကြည်တော်အင်္ဂလိပ် မြို့မဘုရင်ကို သား မြေး မြစ် အစဉ် ရှည်စွာချစ်ကြည်ကြရမည် အကြောင်းကို သက္ကရာဇ်(၁၁၁၈) တစ်ထောင့် တစ်ရာတစ်ဆယ့်ရှစ်ခု၊ ကဆုန်လဆန်းဆယ်ရက်၊ စနေနေ့ ရာဇသံ ရွှေပေစာနှင့် ချစ်ကြည်စွာကြားရောက်အပ်သော အင်္ဂလိပ်မြို့မကို အစိုးရသော အကြည်တော် အင်္ဂလိပ်မြို့မဘုရင်။”
သားတော်အစဉ်၊ မြေးတော်အဆက်၊ မြစ်တော်အညွန့်၊ အကြည်တော်အင်္ဂလိပ် မြို့မဘုရင်ကို သား မြေး မြစ် အစဉ် ရှည်စွာချစ်ကြည်ကြရမည် အကြောင်းကို သက္ကရာဇ်(၁၁၁၈) တစ်ထောင့် တစ်ရာတစ်ဆယ့်ရှစ်ခု၊ ကဆုန်လဆန်းဆယ်ရက်၊ စနေနေ့ ရာဇသံ ရွှေပေစာနှင့် ချစ်ကြည်စွာကြားရောက်အပ်သော အင်္ဂလိပ်မြို့မကို အစိုးရသော အကြည်တော် အင်္ဂလိပ်မြို့မဘုရင်။
စာအရ..” ရာဇသံ ရွှေပေစာနှင့် ချစ်ကြည်စွာကြားရောက်အပ်သော” ဆိုထားသမို့…
“သံ” ဆိုတာ.. သံ (Diplomacy) ကိုသဘောထားတယ်မှတ်ပါတယ်..။
မှတ်ဖူးခဲ့တာက.” ရာဇသံ” ဆိုတာ.. ဘုရင်က.. သတိပေး..အမိန့်ပေးတဲ့ဖက်”ကဲ”တယ် ထင်နေခဲ့တာ..
“ငါကိုယ်တော်မြတ်.. ရာဇသံပေးလိုက်သည်”… ဆိုတာမျိုး ဖတ်ဖူးနေခဲ့တာကိုး….
စာလေးအတွက်.. သာဓု.. ကျေးဇူး…
ရာဇသံ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ကျနော်လဲစဉ်းစားနေတာ…
လူသာမန်တစ်ယောက်တောင် စေတနာအစော်ကားခံရရင် တော်တော်ဒေါသထွက်ကြတာလေ..
ရေမြေ့သနင်း ရှင်ဘုရင် ဆိုတော့လဲ ဒေါသမီးဟုန်းဟုန်းတောက်ရောပေါ့ …
ရာဇ၀င်မှာတော့ စာတင်သွားရတာပေါ့လေ …
အဲ့ဒီ ရွှေပေလွှာလေး အနီးကပ်မြင်ဖူးချင်တယ် လက်ရေးလက်သားတွေကိုရောပေါ့။ စာအုပ်ထွက်ရင်ပြောပါအုန်း။
ရွှေပေလွှာ က စာတွေကို ကူးသွားမယ်နော် အစ်မ
တံဆိပ်တုံးပုံပါတဲ့ဟာတွေလို့.. တံဆိပ်တုံးဒီဇိုင်းကြိူက်တာနဲ့… သိမ်းထားတာ တင်ပေးလိုက်တယ်..
The Golden Letter : Left side with rubies and hamsa seal
ဆက်စပ် သတင်းလေးတွေ့ မိတာနဲ့လက်တို့ လိုက်ပါတယ်ဗျား..
၁၇၅၄ ခုနှစ်မှာ အင်းဝနေပြည်တော်ကို သိမ်းယူအပြီး အထက်မြန်မာပြည်ရဲ့  ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အလောင်းမင်းတရားကြီးဟာ တောင်ပိုင်းကို သိမ်းယူနိုင်ဖို့အတွက် စစ်လက်နှက်တွေ လိုအပ်တယ်လို့တွေးကာ အင်္ဂလိပ်ဘုရင်နဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့ရန် ရည်ရွယ်ပြီး အဲဒီအချိန်တုန်းက လိုအပ်တဲ့ ထောက်ပံ့မှုတွေအတွက် အားကိုးနေရတဲ့ အရှေ့  အိန္ဒိယ ကုမ္ဗဏီကနေတစ်ဆင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဒရပ်မြို့ ကနေ ၁၉ ၅၆ ခုနှစ်မေလမှာ ချစ်ကြည်ရေး ရွှေပေလွှာကိုပေးပို့လိုက်ပါတယ်။
“အဲဒီ ရွှေပေလွှာကို ၁၉ ၅၈ ခုနှစ်ကျမှ အင်္ဂလန်ဘုရင် ဒုတိယမြောက် ဂျော့ခ်ျထံကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်၊ စာအိပ်ပေါ်မှာလည်း မဒရပ်ကနေ ရောက်လာတဲ့ အိန္ဒိယမင်းသားထံက စာဆိုပြီး မှားယွင်းဖော်ပြထားပါတယ်တဲ့။ အင်္ဂလိပ်ဘုရင်ကလည်း စာမပြန်ခဲ့တဲ့အပြင် သူ့ဇာတိ Hanover မြို့ က စာကြည့်တိုက်ဆီ အဲဒီစာကို တန်းပို့လိုက်ပါတယ်။ ဂျော့ခ်ျဘုရင်ကလည်း တိုင်းတပါးကလာတဲ့ အနုပညာလက်ရာမြောက်တဲ့ စာအဖြစ်လောက်သာ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးအရတော့ စိတ်ဝင်စားခဲ့ပုံမရပါဘူးတဲ့။
အပြည့်အစုံ – မိုးမခ မီဒီယာ
အဲဒီစာရေးတဲ့ဆရာတော်က.. တပည့်တော်.. အဲ…အဲ.. ကျုပ်ဆီလည်း.. အဲဒီသတင်းပို့ထားပါတယ်..။
.. ကြည့်ရတာ.. ဆရာတော်လည်း.. ဆရာမပြုံးရေးနေတာတွေ ဖတ်နေတယ်ထင်မိကြောင်း… :harr:
သူကြီးနဲ့ ဦးဗိုက်ကို ကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှင်။
မိုးမခမှာပါတာ အခုတင်ပဲ ဖတ်ပြီးသွားပါပြီ။ တိမ်မြုပ်နေတဲ့ သမိုင်းဝင်ပစ္စည်း အခုလိုပေါ်ပေါက်လာတာ၊ အများသိရှိ တန်ဖိုးထားကြရတော့မှာ ၀မ်းသာစရာ သတင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းမှာ အဲဒီစာတမ်းကို ထုတ်ဝေဖို့ ခက်ခဲနေပါတယ်ရှင်။ ဒေါက်တာလိုင်ဒါက ပြုံးနဲ့ ရန်ကုန်မှာတွေ့ ဖို့ ချိန်းထားပြီးမှ ဘာဖြစ်လို့မှန်းမသိ သူမလာနိုင်ဘူး။ သူ့စာတမ်းက academic ဖြစ်လွန်းတဲ့အတွက် ထုတ်ဝေ သူတွေ လက်ရှောင်တယ်။ ဂျာမနီသံရုံးကလည်း မထုတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့။ စာသိပ်မြင့်နေလို့ပါတဲ့။ ဒါကြောင့် သူက စာမလေးအောင် နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ်က သူရေးတဲ့ မူရင်းစာတမ်းအတိုင်းသာ တန်ဖိုးကြီးတာပါ။ သူ့စာတမ်းထဲမှာ မြန်မာ့သမိုင်းဟာ ကိုလိုနီခေတ်အရေးအသားကြောင့် ဘယ်လောက်တောင် ကြွေးတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို အသေးစိတ်ရေးထားတာပါ။ အဲဒါတွေက စာသိပ်လေးနေတာပါ။ ခုအနေအထားက
ရာဇသံ အနာဂတ် ဘယ်ရောက်နေပြီမှန်း မသိတော့ပါဘူး။ ပြုံးက အကြံကုန်လို့ မန်းဂဇက်ထဲ ရေးထည့် လိုက်တာပါ။ သူကြီးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
တစ်ခုရှိတာက နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ သက်တမ်းရှိတဲ့ ရာဇသံရွှေပေ ကသာလျှင် တန်ဖိုးရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒေါက်တာ လိုင်ဒါ ရဲ့ စေ့စပ်လွန်းတဲ့ စာတမ်းကပါ တန်ဖိုးရှိနေတာပါ။
နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ အတွင်း မြန်မာစာ ဘယ်လောက်ပြောင်းသွားလဲ ဆိုတာ လက်ဝဲနော်ရထာ စာကို ဖတ်တာ မနဲ ဖတ်ယူရတယ် ။
အဲ့ဒီ့ ကထဲက မြန်မာတွေအကြွားသန်တာလည်း သိလိုက်ရပါ့ ..
ကိုထူးဆန်းရေ — ဒေါက်တာ ဂျက်လိုင်ဒါကတော့ ဒီလိုမထင်ဘူးနော်။ အဲဒီစာကို တစ်လုံးချင်းစီ အဓိပ္ပါယ် ဖော်ထားတာ ဖတ်ရရင် ဖျားသွားဦးမယ်။ သူရို့ အနောက်တိုင်းသားတွေ တော်ပုံက အံ့ကိုသြရော။ တစ်ပြိုင်တည်းပို့ခဲ့တဲ့ စာလေးစောင် (ဟိုးထံတစ်စောင်၊ ပီးဂေါ့ထံ၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ထံ၊ ဂျော့ဘုရင်-၂ထံ) ကို ချပြပြီး ဂုဏ်သိမ်ခွဲခြားပုံကို ဒေါက်တာက အတိအကျမြင်ခဲ့တာနော်။ စာပေအနုပညာ အဆင့်အတန်း မြင့်တာကို ဒေါက်တာက ထောက်ပြခဲ့တာ။ နိုင်ငံခြားသားက ဘာဖြစ်လို့ ကိုယ့်မြန်မာအကြောင်း ပိုသိနေသလဲကို မသိတော့ပါဘူး။
ဘုန်းတော်အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူလှသော သုနာပရန္တတိုင်း၊ တမ္ဗဒီပတိုင်း၊ ကမ္ဘောဇတိုင်းစသော တိုင်း ကြီးအပေါင်းတို့၌၊ မြန်မာပြည်၊ ရှမ်းပြည်၊ ယွန်းပြည်၊ ကသည်းပြည်၊ (ဟံသာဝတီ)ပြည်၊ ရာဇဌာနီပြည်ကြီးထီး ဆောင်းမင်းအပေါင်းတို့ကို အစိုးရတော်မူသော ပတ္တမြား၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေး၊ သံ၊ ပယင်း ရတနာတွင်းများသခင် ဆင်ဖြူ၊ ဆင်နီ၊ ဆင်ကျား၊ အရိန္ဒမာစကြာရွှေလှံရ အာဒိစ္စဝံသနေမင်း၏ အဆက်အနွယ်၊ အဆောင်ဆောင် သော ရွှေနန်းရွှေပြဿဒ်သခင်ဖြစ်တော်မူသော ရတနာပူရ အင်းဝပြည်ကြီးနှင့်တကွ အယုဇ္ဈပူရမည်သော ရတနာ သိင်္ဃ ကုန်းဘောင်ရွှေပြည်ကြီးကို၊ အစိုးရတော်မူသော
ကျွန်တော်က ဒီစာ တစ်စောင်ထဲ ဖတ်ရတာ ဆိုတော့ ဒီလို ညွှန်းဆိုထားလို့ ပြောတာပါ ဆရာမရယ်..
မည်စလီပရုပ် … ဆိုတာ ကျွန်တော် ဘာကိုဆိုလိုမှန်း ရေးရေးဘဲ သဘောပေါက်လို့ပါ ။
အရေးအသား ၊ရေးသားပုံတွေက ကျွန်တော်တို့ ခေတ်နဲ့ မတူတော့ဘူး ဆိုလိုတာပါ ခင်ဗျ။
လွန်ခဲ့တဲ့.. နှစ် ၂၅၀ကျော်က.. တိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်နိုင်တဲ့.. စာပေအက္ခရာရှိတုံးကအဖြစ်တွေတောင်.. အခုခေတ်မှာ..အလွဲအမှား .. မပြည်မစုံ.. သမိုင်းအဖြစ်တွေကောက်ယူကြတာတွေ့ရတာမို့..
အဲဒီခေတ် ပေထက်အက္ခရာတင်တာတွေမှာလည်း.. အလွန်အကျွံပင့်မြှောက်ရေးတာတွေရှိတာမို့..
သမိုင်းဆိုတာကို.. ဖွင့်ဆိုကြရာမှာ.. သတိတရားရစရာတွေပါပဲ..။
ဒါနဲ့ယှဉ်ပြီး.. လွန်ခဲ့တဲ့..နှစ် ၂၅၀၀ကျော် ဂေါတမဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူတဲ့..ခေတ်သမိုင်းကို.. ပြန်တွေးကြည့်ကြဖို့ပါပဲ..
တရားဓမ္မတွေကို.. ဒီခေတ်..မြန်မာအက္ခရာ..စာနဲ့ပြန်ရေးထားကြရာမှာ.. ဘယ်လောက်ဘက်လိုက်လွဲကြမလည်း.. ဆွဲတွေးယူ.. လွဲတွေးယူ.. အစွဲခင်းယူတွေများကြမလည်း.. သိသာပါတယ်..
အဲဒီခေတ်မှာ.. ပေထက်အက္ခရာမတင်နိုင်… သချာင်္ဂဏန်းမတွက်တတ်ကြတဲ့အပြင်.. အဲဒီခေတ်က အသုံးပြုတဲ့.. ဘာသာစကားက အခုခေတ်မှာ ..မရှိ..မကျန်နဲ့.. မို့လေ…..